Masar oo ka Walaacsan Qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya | Baydhabo Online
Masar oo ka Walaacsan Qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya
Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay si weyn uga xun tahay Qaraxyada ka dhacaya Magaalada Muqdisho , islamarkaana la la beegsanaayo goobaha ay isku yimaadaan dadweynaha iyo sidoo kale xarumaha ay ku shaqeyso dowladda Soomaaliya.
Dowladda Masar ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ciidanka ammaanka Soomaaliya ay qaadan tilaabooyin looga hortagayo Qaraxyada iyo sidoo kale weerarada tooska ah ee ay soo qaadayaan Xarakada Al-Shabaab ee ka dhacaya Magaalada Muqdisho.
Dowladda Masar ayaa sheegtay dhibaato walba oo soo gaarta shacabka Soomaaliyeed in ay tahay mid soo gaartay shacabka Masar ,madaam labada dal yihiin saaxiibo dhow.
War kasoo baxay Wasaarada arimaha dibada dowladda Masar ayaa lagu sheegay in xukuumada Masar ay labo jibaari doono taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaarada arimaha dibada Masar Axmed Abu Zeid ayaa sheegay in ay aad uga xanuunsadeen Qaraxii shalay ka dhacay Suuqa Beerta ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir.
” Dowladda Masar waxa ay si aada uga welwelsan tahay Qaraxyada ay ku dhamaanayaan shacabka Soomaaliyeed ee lala eeganaayo xarumaha dowladda iyo sidoo kale hay’adaha sida gaarka ah loo leeyahay , waan garabtaagan Soomaaliya , waxaana ka shaqeyn doonaan sidii shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaan lahaayeen nabad” sidaas waxaa yiri Afhayeenka Wasaarada arimaha dibada Masar Axmed Abu Zeid.
Hadalka kasoo baxay dowladda Masar ayaa kusoo beegmaya xilli shalay Suuqa Beerta ee degmada Waabari uu ka dhacay Qarax loo adeegsaday Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof in ka badan 30 qofna ay ku dhaawacmeen .